Ikhaya > I-Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
ICofttek yinkampani esezingeni eliphezulu ebilokhu imakethe kusukela ngo-2012 futhi yaziwa ngemikhiqizo yayo esezingeni eliphakeme. ukwengeza ukuthi ayinayo i-gluten futhi ayiqukethe ama-allergen ajwayelekile. Ngakho-ke, abantu abathinteka ezinhlotsheni ezahlukahlukene zama-allergen bangathatha lesi sithasiselo ngaphandle kokulahlekelwa ukuthula kwengqondo. isengezo seCofttek PQQ singenye yezinto ezihamba phambili I-Pyrroloquinoline Quinone izithasiselo ezitholakala manje emakethe. Uma ufuna enye imifino, sincoma ukuthenga isengezo se-PQQ Energy kusuka ku- Cofttek.
I-Pyrroloquinoline Quinone disodium usawoti we-FAQ
Kuyini iPyrroloquinoline Quinone (PQQ)?
I-Pyrroloquinoline Quinone noma i-PQQ iyindawo etholakala ezitshalweni kanye namagciwane amaningi nama-eukaryotes eneseli elilodwa, njengemvubelo. I-PQQ nayo ikhona ngokwemvelo obisini lwebele lomuntu kanye no-soya ocoliweyo, i-kiwi, ipapaya, isipinashi, iparsley, i-oolong, upelepele oluhlaza kanye netiye eliluhlaza. Ucwaningo olwenziwe ezilwaneni luxhumanise ukushoda kwe-PQQ noma i-PQQ ngokungaphelele kokuphendula okubuthakathaka kokuzivikela komzimba, ukukhubazeka kokukhula, ukusebenza okungajwayelekile kanye nokunciphisa ukuguquguquka kwe-metabolic.
Sekuyiminyaka eminingi abacwaningi becabanga iPyrroloquinoline Quinone (I-PQQuhlobo lwevithamini. Kodwa-ke, ucwaningo olwenziwe kule minyaka embalwa edlule luveze ukuthi iPyrroloquinoline Quinone iyisakhamzimba esinezimfanelo ezinjengevithamini ezinamandla okusebenza njenge-co-factor noma i-enzyme booster enqubeni yokwehlisa-i-oxidation ebandakanya ukudluliswa kwama-electron phakathi kwamabili izinhlobo. Ngamazwi alula, i-PQQ izibophezela ngama-quinoprotein akhona emzimbeni futhi isebenza ngokubambisana nabo ukuqeda ama-radicals wamahhala. Ucwaningo lwathola ukuthi ama-quinoprotein asebenza ngokuphindwe kayikhulu kune-Vitamin-C njenge-anti-oxidant. Ucwaningo lwamuva luye lwembula ukuthi i-PQQ ithinta ukudluliswa kwamandla kanye ne-metabolism yeselula ngokwandisa inani eliphelele le-mitochondria emzimbeni. Yilawa maqiniso abalulekile abangele ukwanda okungazelelwe kokuthandwa kwe-Pyrroloquinoline quinone eminyakeni yamuva.
Yini eyenziwa yi-pyrroloquinoline quinone?
Ngaphezu kokuba yisici sokukhula kwezitshalo kanye ne-cofactor yebhaktheriya, i-pyrroloquinoline quinone (PQQ) ivikela i-mitochondria ekucindezelekeni kwe-oxidative futhi ithuthukisa i-mitochondriogenesis.
Ungakanani i-PQQ okufanele uyithathe nsuku zonke?
Kuze kube manje awukho umkhawulo ophezulu noma ophansi osunguliwe I-Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) isilinganiso. Kodwa-ke, imiphumela ethathwe ezifundweni zezilwane yembula ukuthi le nhlanganisela iba bioactive lapho ithathwa ngemithamo esezingeni eliphansi njenge-2 mg. Kodwa-ke, izithasiselo eziningi zokudla kulezi zinsuku ziyatholakala ebangeni lama-20 mg kuye kuma-40 mg, okubhekwa njengobubanzi obuphephile. I-PQQ itholakala kakhulu ngendlela yamaphilisi, abantu abelulekwa ukuba bawathathe esiswini esingenalutho. Kodwa-ke, abasebenzisi bayelulekwa ukuthi bangadluli umthamo we-80 mg ngosuku.
Kufanele ngiyithathe nini i-CoQ10 ekuseni noma ebusuku?
Kumele kuqashelwe ukuthi ukuthatha i-CoQ10 eduze nesikhathi sokulala kungadala ukuqwasha kwabanye abantu, ngakho-ke kungcono ukuyithatha ekuseni noma ntambama (41). Izithako ze-CoQ10 zingasebenzisana nemithi ethile ejwayelekile, kufaka phakathi ama-thinner egazi, ama-anti-depressants kanye nemithi yokwelapha ngamakhemikhali
Ngabe i-Q imeleni ku-CoQ10?
ICoenzyme Q10 (CoQ10) iyi-antioxidant ekhiqizwa ngumzimba wakho ngokwemvelo. Amaseli akho asebenzisa i-CoQ10 ukukhula nokukhathalela.
Ngabe imitochondria ingavuselelwa kanjani?
Ukuphendula isisusa, i-mitochondria ibhekana nemijikelezo ye-fusion / fission ukuze ivumelane nemvelo. Ngakho-ke kunengqondo ukucabanga ukuthi i-plasticity ye-mitochondrial dynamics iyadingeka ekuvuseleleni kabusha kwe-neuronal.
Ingabe i-CoQ10 ine-quinine kuyo?
ICoenzyme Q10 ingeyomndeni wezinto ezibizwa ngama-ubiquinones ezihlobene ngokwakha ne-quinine yamakhemikhali. Uma uqinisekile ukuthi une-allergen ye-quinine, kufanele ukhulume nodokotela wakho ngaphambi kokuqala ukuthasisela nsuku zonke nge-CoQ10.
Kungani bakhiphe i-quinine emakethe?
I-US Food and Drug Administration (i-FDA) iyalele ukuthi kususwe imikhiqizo yezidakamizwa engagunyaziwe equkethe i-quinine, icaphuna ukukhathazeka okubucayi kwezokuphepha nokufa okuhlobene nokusetshenziswa kwayo. Lesi senzo siyingxenye yomzamo omkhulu wokususa yonke imishanguzo engaphephile, engagunyaziwe emakethe.
Yiluphi uhlobo oluhle kakhulu lwe-coenzyme Q10?
I-Ubiquinol ibalwa ngama-90% we-CoQ10 esegazini futhi iyindlela efakwa kakhulu. Ngakho-ke, kunconywa ukuthi ukhethe kwizithasiselo eziqukethe ifomu le-ubiquinol
Wenzani uCo Q 10 emzimbeni?
I-CoQ10 ikhonjisiwe ukuthi isiza ukuthuthukisa impilo yenhliziyo nokulawulwa kukashukela egazini, isize ekuvikeleni nasekwelapheni umdlavuza futhi inciphise imvamisa ye-migraines. Kunganciphisa nomonakalo we-oxidative oholela ekukhathaleni kwemisipha, ukulimala kwesikhumba kanye nezifo zobuchopho namaphaphu.
Ingabe i-PQQ iwela isithiyo sobuchopho begazi?
Okufingqiwe. I-Pyrroloquinoline quinone (PQQ), eyaziwa nangokuthi i-methoxatin, i-orthoquinone encibilika emanzini, i-orthoquinone eqale yahlukaniswa namasiko amabhaktheriya e-methylotropic. … Kubonakala sengathi kuso sonke isilwane, i-PQQ ayiweleli umgoqo wegazi nobuchopho.
Kungani Sidinga I-Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)?
Njengoba abantu beguga, ubuchopho babo buphoqeleka ukuba bulwe nemithombo eminingi yokulimala. Ngenkathi eminye imithombo yomonakalo ibhalisa zero kuya kumthelela omncane ebuchosheni bomuntu, ukulimala okuthile kuba yimbangela yokuphazamiseka kwe-neurodegenerative kanye nokulimala okuqhubekayo okuthinta imithambo yegazi. Eminyakeni yamuva nje, abantu bakhathazeke kakhulu ngempilo yobuchopho futhi ngenxa yalokho, ucwaningo, kanye nokwazisa ngokusebenza kobuchopho kanye nempilo, kuye kwaqina kakhulu. Abaphenyi baqhubeka ngokuqhuba izifundo zokutadisha nokuhlaziya umphumela wamakhemikhali nezinhlanganisela ezahlukahlukene empilweni yobuchopho bomuntu. Enye into enjalo evuse intshisekelo yabaphenyi nososayensi emhlabeni jikelele yiPyrroloquinoline Quinone (PQQ). Kulesi sihloko, sixoxa ngakho konke okufanele sazi ngePyrroloquinoline Quinone, kufaka phakathi ukusebenza kwayo, izinzuzo, ukukhawulwa komthamo kanye nemiphumela emibi. Ngakho-ke, qhubeka uqhubeke.
Nciphisa ukuvezwa kwe-toxin. Nikeza izakhamzimba ezivikela i-mitochondria ekucindezelekeni kwe-oxidative.
Sebenzisa izakhi zomzimba ezenza ukukhiqizwa kwe-ATP kwe-mitochondrial.
Ungakwazi ukwandisa i-mitochondria?
Ukuzivocavoca umzimba kuyindlela engcono kakhulu yokwandisa ukungena kwakho komoya-mpilo, okubaluleke kakhulu kumjikelezo we-mitochondria's Krebs. Njengoba umzimba wakho usebenzisa amandla amaningi, uzoziphoqa ukuthi ukhiqize ama-mitochondria amaningi ukuhambisana nesidingo.
Ingabe i-PQQ quinine?
I-Pyrroloquinoline quinine, eyaziwa nangokuthi i-PQQ, iyi-redox cofactor kanye nenhlanganisela ye-polyphenolic evame ukutholakala ezitshalweni zokudla. Itholakala ku-cytoplasm yamaseli futhi isiza ngokunciphisa ukusabela kanye ne-oxidation.
Yini i-quinine etholakala ngokwemvelo?
I-Quinine iyinhlanganisela ebabayo evela kumagxolo esihlahla se-cinchona. Lesi sihlahla sitholakala kakhulu eNingizimu Melika, eMelika Ephakathi, eziqhingini zaseCaribbean nasezingxenyeni ezisogwini olusentshonalanga ye-Afrika. I-Quinine ekuqaleni yathuthukiswa njengomuthi wokulwa nomalaleveva.
Kusho ukuthini iPyrroloquinoline Quinone disodium salt (PQQ)?
Uhlu lwemibuzo lwangaphambi kokuthola iziqu (i-PQQ, kwesinye isikhathi olubizwa ngokuthi uhlu lwemibuzo lokuhlola abaphakeli) ibeka uchungechunge lwemibuzo kulabo abangase babe ngamathenda okufanele baphendule mayelana nezinga labo lesipiliyoni, amandla kanye nokuma kwabo kwezezimali.
Uyini umehluko phakathi kwe-coQ10 ne-ubiquinol?
I-Pyrroloquinoline quinone (PQQ) iyinhlanganisela ye-quinone encibilikiswa ngamanzi enamandla okulwa ne-oxidant. Ucwaningo lwangaphambilini kumagundane ondle ukudla okuphelile kwe-PQQ kukhombisile ukuthi amazinga aphakeme we-serum triglyceride (TG) anciphile ngemuva kokungezelelwa kwe-PQQ.
Ingabe i-PQQ iphephile?
Ucwaningo olwenziwe kuze kube manje selusungule ukuthi i-PQQ ibekezelelwa kahle ngumzimba uma uthathwa ngaphansi kwemikhawulo ebekiwe. Kodwa-ke, ukweqa umthamo obekiwe kungaholela emiphumeleni emibi, enjengobuhlungu bekhanda, ukukhathala nokudonsa. Ngakho-ke, abasebenzisi bayalulekwa ukuba banamathele kumthamo ophephile we-40 mg ngosuku futhi bangadluleli ngaphezu komthamo we-80 mg. Okubaluleke kakhulu, yize i-PQQ yaziwa ukuthi ibekezelelwa kahle ngumzimba, kungcono ukubonana nodokotela ngaphambi kokuqala ukubamba kwayo uma ngabe unezimo zepreexisting.
Ingabe i-PQQ ingcono kune-CoQ10?
ICoQ10 ifana ne-supercharger ethuthukisa ijubane lesitimela. I-PQQ injengenkampani yokwakha ehlala isebenza ukwengeza ezinye izimoto esitimeleni sakho. Ngokufingqa, i-CoQ10 ithuthukisa ijubane lesitimela sakho sokukhiqiza amandla, ngenkathi i-PQQ ingeza futhi yakha umthamo owengeziwe esitimeleni sakho.
Ngingathatha malini i-CoQ10?
Awukho umthamo ofanele weCoQ10. Ucwaningo lusebenzise imithamo yeCoQ10 esukela kuma-milligram angama-50 kuye kuma-milligram ayi-1,200 kubantu abadala, kwesinye isikhathi ihlukaniswa ngamanani amaningi phakathi nosuku. Umthamo ojwayelekile wansuku zonke ungama-milligram ayi-100 kuya kuma-200 milligram.
Ingabe i-CoQ10 ibangela amahlule egazi?
Ama-anticoagulants. I-CoQ10 ingenza izidakamizwa zokuncipha kwegazi, njenge-warfarin (Jantoven), zingasebenzi kahle. Lokhu kungakhuphula ubungozi begazi.
Kungani i-Q10 ibiza kangaka?
Lapho-ke i-Q10 idlula isuka egazini iye kumaseli iye ezicutshini, ibuye ibuyiselwe esimweni sayo se-bio-energetic, ubiquinone. Ifomu le-ubiquinol le-Q10 alizinzile kakhulu futhi, ngenxa yalokho, libiza kakhulu kumkhiqizi we-Q10 capsule azosebenza naye.
I-CoQ10 ithatha isikhathi esingakanani ukusebenza?
Njengoba amazinga e-Ubiquinol eqala ukubuyiselwa kwi-plasma yegazi, abantu abaningi kufanele babone izimpawu ezinciphile zokukhathala cishe ngosuku lwesihlanu ngemuva kokuqala isithasiselo. Imvamisa kungakapheli amasonto amabili kuya kwamathathu, inani lomzimba wakho le-Ubiquinol lizofinyelela emazingeni amahle, futhi abaningi bazozizwa umehluko ngamandla phakathi nalesi sikhathi.
Iyini imiphumela emibi yokuthatha i-CoQ10?
Izithako ze-CoQ10 zibonakala ziphephile futhi zikhiqiza imiphumela emibi embalwa lapho ithathwa njengoba iqondisiwe.
Imiphumela emibi ethambile ingafaka izinkinga zokugaya ukudla njenge:
Ubuhlungu besisu phezulu
Eminye imiphumela emibi engaba khona ingafaka:
Ukuphathwa yikhanda nesiyezi
Ukulunywa kwesikhumba noma ukuqubuka
Ukuthukuthela noma ukuyaluza
Ukuphepha kokusetshenziswa kwe-CoQ10 ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa akukaze kusungulwe. Ungasebenzisi i-CoQ10 uma ukhulelwe noma uncelisa ngaphandle kwemvume kadokotela wakho.
Ingabe i-pyrroloquinoline quinone iyefana ne-quinine?
I-Pyrroloquinoline quinine, eyaziwa nangokuthi i-PQQ, iyi-redox cofactor kanye nenhlanganisela ye-polyphenolic evame ukutholakala ezitshalweni zokudla. I-PQQ ingasetshenziswa njengesengezo sokudla ukusiza ukukhiqizwa kwamandla weselula kanye nempilo ye-mitochondrial kanye nokuvikela umzimba ekucindezelekeni kwe-oxidative.
Ingabe i-PQQ ilungele inhliziyo?
I-PQQ Enomsoco Onamandla Ingavimbela Ukwehluleka Kwenhliziyo. Ucwaningo olusha sha lomtholampilo, olushicilelwe kuhlelo lwakamuva lweCardiovascular Diagnosis & Therapy, luphetha ngokuthi umsoco obalulekile iPyrroloquinoline Quinone (PQQ) ungabamba iqhaza ekuvikeleni ukwehluleka kwenhliziyo okungamahlalakhona (CHF).
Ungayithatha i-PQQ ngenkathi ukhulelwe?
Imiphumela yethu iphakamisa ukuthi ukwengezelelwa nge-PQQ, ikakhulukazi ngesikhathi sokukhulelwa kanye nokuncelisa, kuvikela inzalo ezinhlelweni ezithuthukiswa ezithuthukiswa yi-WD ze-hepatic lipotoxicity futhi kungasiza ekunciphiseni ubhadane oluqhubekayo lwe-NAFLD esizukulwaneni esilandelayo.
Ingabe i-PQQ iphephile kubantu abanesifo sikashukela?
Le miphumela elwa nesifo sikashukela ye-PQQ yayisekelwa yizakhiwo zayo zokulwa ne-antioxidative, njengoba i-PQQ yayingavimbeli izicubu ze-LPO kuphela kepha iphinde ithuthukise i-serum insulin ne-HDL, kanye nama-antioxidants amaselula.
Uyiqinisa kanjani i-mitochondria?
Izindlela Ezi-10 Zokukhuthaza iMitochondria Yakho
Yidla amakhalori ambalwa.
Ukuthatha izithasiselo ze-PQQ.
Phonsa ama-carbs acwengekile njenge-soda, isinkwa esimhlophe namakhekhe.
Yidla amaprotheni asezingeni elifanele njengenyama yenkomo eyondliwe ngotshani namaqanda akhuliswe emadlelweni
Beka phambili ukulala amahora ayisishiyagalombili ubusuku ngabunye.
Nciphisa ukucindezeleka ngamasu okuphumula njengokuzindla noma ukubhucungwa nsuku zonke.
Zama ukwelashwa kokushisa.
Thola okungenani imizuzu engama-30 yomsebenzi nsuku zonke.
Yidla ukudla okune-antioxidant-rich nge-resveratrol efana noshokoledi omnyama.
Yidla imithombo ye-omega-3s ne-alpha-lipoic acid.
Yini i-PQQ antioxidant?
I-Pyrroloquinoline quinone (PQQ) iyi-redox cofactor esanda kutholakala obisini lomuntu. I-PQQ yayiyi-antioxidant evikela kahle i-mitochondria ngokumelene ne-lipid peroxidation ene-oxidative, ukwakheka kwamaprotheni carbonyl nokungasebenzi kochungechunge lokuphefumula lwe-mitochondrial.
Yini i-vitamin PQQ?
I-PQQ iyinhlanganisela yemvelo etholakala ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokudla. Isebenza njenge-antioxidant futhi isekela umsebenzi we-mitochondrial onempilo. Kuthathwa njengesengezo sokukhuthaza ukusebenza kobuchopho.
Yini i-PQQ 20?
I-Pyrroloquinoline quinone noma i-PQQ iyinhlanganisela esanda kutholakala efana nevithamini etholakala kakhulu ekudleni kwezitshalo. Kwatholwa okokuqala njenge-cofactor yamagciwane afana nendlela amaVithamini B enza ngayo kubantu. I-PQQ inomsebenzi ofana ne-antioxidant ne-B-vitamin, enezinzuzo ezahlukahlukene zobuchopho nomzimba.
Yikuphi ukudla okuqukethe i-PQQ?
Cishe udla i-PQQ encane nsuku zonke. Itholakala ngamanani amancane ekudleni okuningi okufana nesipinashi, upelepele oluhlaza, i-kiwifruit, i-tofu, i-natto (ubhontshisi obilisiwe), itiye eliluhlaza, nobisi lomuntu. Kodwa-ke, ngokuvamile asitholi i-PQQ eningi ekudleni - okulinganiselwa ku-0.1 kuya ku-1.0 milligrams (mg) ngosuku.
Yikuphi ukudla okwandisa imitochondria?
Ezinye zalezi zakhi zomzimba ezibalulekile zifaka i-L-carnitine ne-creatine, okubili okubalulekile ekunikezeni amandla kwi-mitochondria. Ungakuthola kokubili ngokwengeza inyama yenkomo edliwe ngotshani, inyathi, amaqanda, izinkukhu, ubhontshisi, amantongomane nembewu ekudleni kwakho.
Ingabe ukuzila ukudla kuyayinyusa i-mitochondria?
Ucwaningo luthole ukuthi ukuzila ukudla kuthuthukisa ukuhlangana kwe-mitochondrial nama-peroxisomes, uhlobo lwe-organelle olungakhuphula i-fatty acid oxidation, inqubo eyisisekelo yemetabolism.
Yikuphi ukuvivinya umzimba okwandisa i-mitochondria?
Ucwaningo olusha luthole ukuthi ukuzivocavoca umzimba - futhi ikakhulukazi ukuqeqeshwa kwesikhawu esiphakeme kokuzivocavoca nge-aerobic njengokuhamba ngebhayisikili nokuhamba - kubangele amaseli ukuthi enze amaprotheni amaningi ngemitochondria yawo ekhiqiza amandla kanye nama-ribosomes awo akha amaprotheni, ayeke ngempumelelo ukuguga ezingeni leselula .
Ungakwazi yini ukulungisa i-mitochondria eyonakele?
Kunqunywe ukuthi ukumelana nomonakalo, i-mitochondria inezindlela ezichazwe kahle zokulungisa ezifana ncamashi nalezi ze-nucleus, phakathi kwazo okukhona lokhu: base base excision repair (BER), mismatch repair (MMR), single-strand break break (SSBR), ukuphela kokujoyina kwe-microhomology-mediated (MMEJ), futhi nokuhleleka kabusha kwe-homology.
Yiziphi izithasiselo ezandisa i-mitochondria?
Izengezo zemvelo zomlomo eziqukethe i-membrane phospholipids, i-CoQ10, i-microencapsulated NADH, l-carnitine, i-α-lipoic acid, nezinye izakhamzimba kungasiza ekubuyiseni ukusebenza kwe-mitochondrial futhi kunciphise ukukhathala okunganqandeki ezigulini ezinezifo ezingamahlalakhona.
Ukusetshenziswa kwe-Pyrroloquinoline Quinone (PQQ).
I-Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ekuqaleni kwakucatshangwa ukuthi kuyivithamini. Kodwa-ke, olunye ucwaningo lusungule njengenhlanganisela engeyona ivithamini eyenzeka kuzo zombili izidlo kanye nezicubu zemammalia. Kodwa-ke, kubalulekile ukugqamisa ukuthi noma kungekho cwaningo oluqinisekisile ukuhlanganiswa kwalo kwamammalia, cishe ama-nanograms ayi-100-400 we-PQQ akhiwa emzimbeni womuntu nsuku zonke. Ngeshwa, leli nani alanele ukuxhasa imisebenzi ehlukahlukene iPQQ efakazelwe ukuthi iyayenza. Ngakho-ke, abantu bavame ukwelulekwa ukuthi basebenzise i-PQQ ngendlela yezithako zokudla.
Ukudla okuntuleka kwi-PQQ kuholela ekunciphiseni ukukhula kuphela kepha kunciphisa nomsebenzi wezocansi. Ngokufanayo, izifundo eziningana zixhumanise i-PQQ ne-ukuaji factor kanye ne-mitochondrial biogeneis. Ngamazwi alula, umzimba womuntu ungazuza kwi-PQQ njengoba ikhuthaza inani nomsebenzi we-mitochondria, ngaleyo ndlela kuholele emazingeni wamandla angcono. I-PQQ yaziwa nangokuthi i-ejenti enhle kakhulu ye-REDOX futhi ivimbela ukuzikhuculula ngokwakho kanye ne-polymerization.
Izinzuzo zePyrroloquinoline Quinone (PQQ).
Intshisekelo yePyrroloquinoline Quinone ikhule kakhulu eminyakeni embalwa edlule njengoba le nhlanganisela ixhunyaniswe nezinzuzo eziningana. Lapha, sibheka izinzuzo zayo ezibaluleke kakhulu zePyrroloquinoline Quinone (PQQ).
① I-PQQ ixhunywe namandla athuthukisiwe aphelele
IMitochondria ngama-organelles amancane akhona ngaphakathi kwamaseli futhi avame ukubizwa njengezindawo zamandla zeseli njengoba ekhipha amandla ekudleni, ngaleyo ndlela anikeze amandla amangqamuzana adinga ukwenza umsebenzi wawo. I-Pyrroloquinoline Quinone ivumela i-mitochondria ukuthi isebenze kangcono, ngaleyo ndlela iholele ekukhuleni kwamandla ngaphakathi kwamaseli. Lokhu kukhuphuka kwamandla ngaphakathi kwamaseli ekugcineni kuyayithola indlela yokuya kuwo wonke umzimba, okuholela ekukhuthazeni kakhudlwana nasemandleni amakhulu. Uma uvame ukuzwa ukuphelelwa ngamandla noma amandla aphansi, izithasiselo ze-PQQ zizokusiza ukukhulisa amazinga akho wamandla. (1) Kushicilelwe: Imiphumela yePyrroloquinoline Quinone (PQQ)
② Ithuthukisa Izici Zokukhula Kwemizwa
I-Pyrroloquinoline Quinone ihlangana nezindlela zomakhalekhukhwini futhi kule nqubo, ngokungaguquguquki kuthinta kahle izici zokukhula kwemizwa. Lokhu, nakho, kuholela ekukhuleni okuthuthukisiwe kwamaseli we-neuronal nezinzwa ezicutshini ze-cranial. Ngakho-ke, i-PQQ ivame ukuxhunyaniswa nokusebenza kwengqondo okuthuthukisiwe. Njengoba ukucwaswa kwe-NGF kuvame ukuxhumaniswa nesifo i-Alzheimer's, izithasiselo ze-PQQ zivame ukunikezwa ukusiza ukwelashwa kwezimo ezihlobene nobudala.
Ukutholwa kwe-QPQQ Kuxhunyaniswe Nokulala Okuthuthukisiwe
Ucwaningo luhlaziye umphumela we-PQQ ekudleni kwabantu. Ucwaningo luhlaziye ababambiqhaza isikhathi esingamasonto ayisishiyagalombili futhi lathola ukuthi labo abadla njalo amasonto ayisishiyagalombili bakwazi ukulala kangcono. Ucwaningo luphinde lwembula ukuthi ukungena kwe-PQQ kunciphisa i-cortisol, i-hormone yokucindezela ephazamisa ukulala okujwayelekile. Yize kudingeka olunye ucwaningo kule ndawo ethile, ucwaningo lokuqala luhlobanisa ngokusobala ukungena kwe-PQQ nokulala okuthuthukisiwe.
④ I-PQQ ikhuthaza inhlalakahle jikelele ngokunciphisa ukucindezeleka kwe-oxidative
I-PQQ yaziwa ngezindawo zayo eziphakeme zokulwa ne-oxidant - yehlisa izinga lamaprotheni asebenza nge-C ne-IL-6 emzimbeni, womabili lawo anomthwalo wokuvuvukala. Izakhiwo zayo ze-oxidative zibuye zenze i-PQQ ibe yimpi ephumelelayo yokulwa nengcindezi ye-oxidative, okuyimbangela ejwayelekile yezifo eziningi ezingamahlalakhona, njenge-carcinomas kanye nezifo ezingenayo i-neurodegenerative. I-PQQ inciphisa ukucindezela ngokunciphisa umonakalo we-oxidative obangelwa ama-radicals wamahhala nokwenza ngcono imetabolism.
⑤ I-PQQ ngokuhlanganiswa ne-CoQ10 Ithuthukisa Umsebenzi Wememori
Ukutholwa kwe-PQQ kuye kwaxhunyaniswa nengcindezi encishisiwe, nayo eholela ekusebenzeni okuthuthukile kokuqonda nasekuthuthukisweni kwememori. Izifundo zocwaningo zenziwe ukutadisha ukuthi i-PQQ iyithinta kanjani inkumbulo. Ucwaningo lwathola ukuthi i-PQQ isebenza ngokubambisana neCoQ10, i-coenzyme esebenza njenge-antioxidant ekhulisa imetabolism futhi evikela amaseli ekulimaleni. I-PQQ ngokuhlangana neCoQ10 ikhombisile ukuthuthukisa ukusebenza kwememori.
⑥ Ezinye Izinzuzo ze-PQQ
Ngaphezu kwezinzuzo ezishiwo ngenhla, i-PQQ inikezela nangezinye izinzuzo ucwaningo olusaqhubeka njengamanje. Isibonelo, ucwaningo olwandulelayo lukhombisile ukuthi ukuphuza kwe-PQQ kuholela ekuvuseleleni ukuzala okuthuthukile.
Ungayithenga kuphi iPyrroloquinoline Quinone (PQQ) Powder ngobuningi?
Uma ungumkhiqizi wezithako zempilo obandakanyeka ekwenziweni kwePyrroloquinoline Quinone ngesilinganiso esikhulu, kusobala ukuthi kufanele ubheke umphakeli wezinto ezingavuthiwe ongakunika i-PQQ powder ngobuningi. Ukuthola umphakeli onokwethenjwa ngekhwalithi nokwethenjwa kuyisihluthulelo sokusetha ibhizinisi eliphumelelayo.
Uma ufuna thenga iPyrroloquinoline Quinone (PQQ) impuphu ngobuningi, indawo engcono yokuthenga yiCofttek. I-Cofttek ibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu elenza amakhemikhali elisungulwe ngonyaka ka-2008 futhi elisebenza kumgomo “Wekhwalithi, Amakhasimende Kuqala, Insizakalo Ethembekile, Inzuzo Yokubambisana”. Inkampani izinikele ekuhlolweni okuphelele, okukuvumela ukuthi inikeze izinsizakalo nemikhiqizo esezingeni eliphakeme kumakhasimende ayo. ICofttek njengamanje ihlinzeka ngemikhiqizo yayo ezinkampanini ezenza imithi eChina, Europe, India naseNyakatho Melika. I-PQQ powder enikezwa yinkampani iza ngamaqoqo angama-25 kilograms, anele ukukhiqiza amaqoqo amaningi womkhiqizo wakho. Okubaluleke kakhulu, iCofttek ineqembu labaphathi abanolwazi neqembu lokuqala le-R & D. Ngakho-ke, ungaqiniseka ukuthi uzothola konke ukulethwa kwakho kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngendlela emangalisayo ngesikhathi esifanele. Uma ufuna ukuthenga iPyrroloquinoline Quinone ngobuningi, xhumana nethimba kwa-cofttek service.
(1) Kushicilelwe:Imiphumela ye-Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) yokwengeza ku-Aerobic Exercise Performance kanye nama-Indices eMitochondrial Biogenesis kumadoda angafundisiwe
(2) Umphumela we-neuroprotective we-pyrroloquinoline quinone ekulimaleni okubuhlungu kwengqondo
(3) Inqubekela phambili yakamuva ezifundweni ngezinzuzo zezempilo ze-pyrroloquinoline quinone
(4) Umphumela we-Antioxidant Supplement Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt (BioPQQ ™) Kumisebenzi Yokuqonda
(5) I-Pyrroloquinoline Quinone
(6) Uhambo lokuhlola i-egt.
(7) I-Oleoylethanolamide (oea) –i-wand yemilingo yempilo yakho.
(8) I-Anandamide vs cbd: yikuphi okungcono empilweni yakho? Konke odinga ukukwazi ngabo!
(9) Konke odinga ukukwazi mayelana ne-nicotinamide riboside chloride.
(10) Izithasiselo ze-Magnesium l-threonate: izinzuzo, isilinganiso, nemiphumela emibi.
(11) I-Palmitoylethanolamide (ipea): izinzuzo, isilinganiso, ukusetshenziswa, ukwengeza.
(12) Izinzuzo eziphezulu zezempilo eziyi-6 zezengezo ze-resveratrol.
(13) Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(14) Isengezo esihle kakhulu se-alpha gpc.
(15) Isengezo esihle kakhulu sokulwa nokuguga se-nicotinamide mononucleotide (nmn).
Ngiyayithanda i-pqq. Bengilokhu ngiyisebenzisa cishe i-2yrs. Kimi kuthuthukisa amandla. Hhayi ngendlela evusa inkanuko kepha ukukhulisa nje okujwayelekile ekucutshungulweni kwengqondo nasemandleni omzimba. Ngiyisebenzisa nsuku zonke 10 noma 20 mg w 100mg ubiquinol. Ngiyayincoma.
Ngithatha ama-40 mg ngosuku. Amandla ami ahlala ehambelana usuku lonke, futhi ngizwa sengathi anikela kwikhwalithi yami enkulu yokulala kanye ne-ashwagandha, i-magnesium, ne-l-theanine.
I-Pyrroloquinoline Quinone kukhulunywe ngayo ocwaningweni lokuthi ungaphola kanjani lapho untanta. Ivuselela i-biogenesis ye-mitochondria entsha futhi ihlangane ne-CoQ10 yokulungiswa kwamaseli. Ngibona umehluko omkhulu emandleni futhi kwesinye isikhathi imizwa lapho ngiyithatha.